Indlu Yokuqashiswa eChembur, eMumbai
Real Estate Listings: » Residential homes » Apartments » IN » Maharashtra » Mumbai » Chembur » Indlu Yokuqashiswa eChembur, eMumbai1
eshicilelwe 8 months ago
Usayizi waphansi: 1055 sq feet
Iyatholakala 2 Bhk Flat Yokuqasha eChembur East Bachelor's Welcome Ventilation Good Sunlight. Umphakathi Onokuthula Kakhulu. Umphakathi Omuhle kakhulu Obukeka kahle. Amanzi, ezokuphepha Ugesi, njll. Eduzane neMakethe, isitolo soMnyango, isitolo esijwayelekile, isitolo sezokwelapha, izitendi zamatekisi eRickshaw, Isiteshi sesitimela u-2-3 min ibanga elihambekayo, njll. Ngemininingwane engaphezulu njll. Ukuzibophezela ekusebenzeni kahle kanye ne-Fast Call
#expert Agent# %chemburghatkopardeonargovandi%
Ibhaliswe ku 17. Aug 2020
Xhumana nomkhangisi 888309xxxx
Ibhaliswe ku August 17, 2020
Isigodi esisempumalanga yeMumbai, eChembur sisebangeni elingamakhilomitha angama-22 ukusuka enkabeni yedolobha. Izindawo ezingomakhelwane zibandakanya iDeonar, iKurla, iGovandi, iMahul, iGhatkopar neChunabhatti. Imigwaqo eminingana efana ne-BPCL, Tilak Nagar, Pestom, Chedda Nagar, Tata Colony, HPCL, Shell Colony, ne-Indian Oyili Nagar ekuMankhurd Link Road kule ndawo. Le ndawo inabantu abaningi bemvelo abaphethwe amaSindhis, amaMaharashtrian namaNdiya aseNingizimu. Le ndawo futhi inezimboni eziningi ezifana neHindustan Petroleum Corporation Ltd., iBhabha Atomic Research Center, i-Tata Power Company Ltd., iRashtriya Chemicals kanye ne-Fertilizer Ltd. kanye ne-Tata Institute of Social Science. Izitudiyo ezidumile njenge-Asha Studios neRK Studios nazo zitholakala lapha. Ukuxhumana kweChembur kuqhosha ngoxhumano oluhle ezingxenyeni ezihlukene zeMumbai kanye naseNavi Mumbai ngemigwaqo ebalulekile yezindawo ezinjengeSundayand Saraswati Marg, VN Purab Marg, RC Marg, Station Avenue Road, Eastern Express Highway kanye neSion Panvel Highway. Ama-Autorickshaws, amatekisi, namabhasi angu-BEST enza uhlelo oluqinile lokuhambisa umphakathi. Ngokuqondene nomsebenzi wokwenza umsebenzi wesitimela, i-Harbour Line yeMumbai Suburban Railway inesiteshi esiseChembur. Abagibeli bangasebenzisa izitimela ezisezingeni eliphansi ezibekelwe iMumbai CST, Andheri, nePanvel ezihamba usuku lonke. Ukuze uthole izitimela ezide, umuntu angafinyelela kalula i-Lokmanya Tilak Terminus esiseduzane. Umugqa 1 weMumbai Monorail owavulwa ngoFebhuwari 2014 une-terminus eChembur. Le ndawo futhi iyindawo ebalulekile yokuhamba ngomgwaqo kubantu abaya ePune besebenzisa iMumbai-Pune Highway noma iMumbai-Pune Expressway. ISouth Mumbai iyatholakala kalula ukusuka kule ndawo ngamakhilomitha ayi-13 ubude. ISantacruz Chembur Link Road (SCLR) exhuma iChembur neSantacruz isanda kusebenza. Izakhiwo ezithengiswayo Imakethe yezindawo zokuhlala eChembur ithole umfutho omkhulu ngenxa yokuxhumana okuthuthukile nge-Eastern Express Freeway, umgwaqo ophakeme kanye ne-monorail engeza ukukhula kwayo okuhamba ngokushesha. Elinye lamaphethelo aluhlaza wedolobha, uChembur uphethe inhlanganisela yama-bungalows amadala, izindawo eziphakeme zanamuhla nezikhala ezivulekile. Inani elikhulu labathengi lihehwa kule ndawo njengendawo yokuhlala ikakhulukazi ngenxa yezinto ezimbili ezibalulekile ukuthenga nokufinyeleleka. Abakhi bezindawo zokuhlala abahlonishwayo abaningana beze nezindawo zokuhlala zikanokusho eChembur. Abahlaziyi banombono wokuthi amanani entengo yempahla azophinde athole ukwazisa ngenxa yendawo yayo enamasu. Ingqalasizinda yezenhlalo. Isikole saseGregorios High, iLoreto Convent School, iRyan International School, i-Holy Family High School, nezinye ezimbalwa ziyizikole ezidumile zale ndawo. Isibhedlela saseSushrut, isibhedlela iMangal Anand, isibhedlela saseHoy, isibhedlela iTandon, isibhedlela i-Ashirwad, isibhedlela saseKher, isibhedlela iDr. Das upasuaji, isibhedlela i-Shashikant, kanye nesibhedlela saseSitla, isibhedlela sase Hegde nezinye izikhungo eziningi ezinjalo zokunakekelwa kwempilo zinakekela izindaba zokwelashwa zasendaweni. izakhamizi. I-IDBI Bank, i-State Bank of India, i-ING Vysya Bank, i-State Bank yasePatiala, i-United Bank of India, iDena Bank namanye amagama aqashisayo embonini yamabhange anamagatsha awo lapha. Le ndawo inezindawo eziningi zokudla okufana nezama-ATM, amaphampu kaphethiloli, izitobha zebhasi, njll. I-Chembur Gymkhana ne-The Acres Club, iBombay Presidency Golf Club, Club Emerald neJ BS Roller Skating Club ngezinye zezindawo zokuzithokozisa lapha. .